Izindaba - Umsuka Nomlando Wamafutha Abalulekile
I-China empeleni yimpucuko yasendulo eqale yasebenzisa izitshalo ezinamakha ukugcina impilo. Izitshalo zazisetshenziswa ezikhathini zasendulo, kusetshenziswa izici zezitshalo ukwelapha izifo, nokushisa impepho ukusiza ukumisa ukuzwana nokulinganisela ngokomzimba nangokwengqondo. .
Umlingo wemvelo usinikeze umthombo oqhubekayo wokuphila, futhi futhi kuyisipho semvelo esintwini, ukuze sihlale sijabulela amagugu ahlukahlukene esiwanikezayo, futhi ukutshala amafutha abalulekile angomunye wawo. Umlando wokusetshenziswa komuntu kwamafutha abalulekile mude njengomlando wempucuko yabantu, futhi imvelaphi yangempela kunzima ukuyiqinisekisa. Ngokwemibhalo egciniwe yomlando, udokotela wase-Arab wasebenzisa iziphuzo zazihluzwa ukuze kutholwe izimbali, ezenziwe amafutha angabalulekile kuze kube yinkathi echumayo yaseGrisi lasendulo. Kungabonakala ukuthi izincwadi zezokwelapha ngaleso sikhathi zaqopha ukusetshenziswa okuningi okusebenzayo kwamafutha abalulekile, ngisho naseGibhithe lasendulo ngaphambi kuka-5000 BC. Umpristi omkhulu wake wagcwalisa isidumbu ngesinongo se-resin sokwenza izidumbu. Ungacabanga ukuthi amafutha abalulekile ayebaluleke kangakanani ngaleso sikhathi.
Ezinkolweni eziningi zasendulo noma emaqenjini ezinhlanga, noma ngabe kunhloboni yomcimbi noma umgubho, izinongo ezahlukahlukene ezikhishwe ezitshalweni bezihlala zisetshenziselwa ukwengeza ubungcwele kulo mkhosi. Singafunda ezinganekwaneni eziningi noma ezindabeni zeBhayibheli. Ingatholakala kumarekhodi.
Ngekhulu le-13, iBologna School of Medicine edumile e-Italy yasungula umuthi wokubulala izinzwa owenziwe ngamafutha ahlukahlukene abalulekile, owawusetshenziswa kakhulu lapho kwenziwa ukuhlinzwa. UHugo, owasungula le mithi kadokotela, kuthiwa naye wayevela eBologna School of Medicine. Umsunguli.
Ngekhulu leshumi nanhlanu, uVerminis wasungula uhlobo "lwamanzi amahle", kwathi umshana wakhe wenza "uFanari Cologne" odumile. Lolu hlobo lwe-cologne lukhonjisiwe ukuthi lunomphumela wokubulala amagciwane, futhi lolu hlobo lwe-cologne nalo lwenziwa ngamafutha abalulekile ezitshalo zezimbali.
EFrance ngekhulu le-16, abanye abantu babejwayele ukugqoka amagilavu ​​ezinongo aqukethe i-lavender namakhambi ahlukahlukene endawo. Ngenxa yalokho, labo ababegqoka amagilavu ​​ezinongo babemelana kakhulu nezifo ezithile zomqedazwe ngaleso sikhathi. Osomabhizinisi abaningi baqala ukugxila. Ukukhiqizwa kwamafutha abalulekile wamakha. Lolu hlobo lwamafutha abalulekile lusize namaGrikhi ukumelana nobhadane. Kusukela lapho, i-aromatherapy egxile kumafutha abalulekile idonse ukunaka kwezazi eziningi futhi kusukela lapho yasakazekela ezindaweni ezahlukahlukene. Ikakhulukazi eminyakeni yamuva, i-aromatherapy iye yanda kancane kancane. Thola ukunakwa umhlaba.
Namuhla, amafutha abalulekile asetshenziswe kabanzi kuzo zonke izici. Isikhungo esikhulu sokukhiqiza samafutha abalulekile emhlabeni yidolobha lasendulo iGrasse eduze neFrance Riviera. Ngakho-ke, ngaphandle kwewayini, iFrance nayo ingathathwa njengezwe elingcwele lamafutha abalulekile namuhla.
Isikhathi Iposi: Sep-22-2020